Tambo dzakanakisa dzekupa maitiro matsva kuApple Watch yako | IPhone nhau
Iyo Apple Watch iri Chigadzirwa chaApple chaicho. Ndinoyeuka ndizvo zvakatumidzwa naTim Cook payakatanga kuunzwa munaGunyana 2014. Uye zvirokwazvo, ndizvo. Kunze kwekungosara kweiyo wachi yekutarisa, munhu wega wega anogona kuve neakasiyana Apple Watch, kwete chete nemaapplication akasiyana asi zvakare nematare akasiyana uye akagadzirirwa kuravira uye, zvedi, aine tambo dzakasiyana dzinoenderana nechero chiitiko uye chimiro. yemumwe mushandisi.
Apple yakaburitsawo mhando dzakasiyana dzemabhande eApple Watch, zvisinei, mitengo yavo yakanyanya uye mumusika tinogona kuwana zvimwe zvakawanda zvakasiyana. Nhasi ndichakuratidza mamwe acho Tambo dzakafanana neidzo dzakapihwa naApple, asi pamitengo yakaderera zvikuru, uye mamwe mabhanhire akatonyanya, saka unogona kuve neApple Watch yakasiyana nezvimwe zvese.
1 Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa.
2 Stainless simbi tambo ine simbi clasp
3 Apple Tarisa Nike Sport Bhendi
4 Bhandi kune anonyanya kufara
5 Kisimusi Koreya yeako Apple Watch
6 "Double Kuratidzira" tambo
Iyi ndeimwe yemabhande akabudirira eApple Watch, uye mumaonero angu, yakanyanya kunaka. Icho chiri mhando ye pajira riya rakagadzirwa nesimbi isina tsvina isingade bhakoro sezvo iine magineti akavharwa. Zviri nyore kwazvo kupfeka, kubvisa uye kugadzirisa kune saizi inodiwa yechiuno, uye newe zvakare unayo mumarudzi akasiyana-siyana (nhema, sirivheri kana goridhe) chegumi cheicho chinodikanwa nekambani yepamutemo, chete € 16,95 kunyangwe panguva ino iwe unogona kana kuwana chimwe chinhu chakachipa kana iwe uchimhanyisa.
Stainless simbi tambo ine simbi clasp
Zvakawanda zvakajairika iyi tambo ye simbi isina simbi nesimbi clasp iyo iwe yaunogona kuwana mumaviri apedzerana, nhema kana sirivheri, uye izvo zvakakosha kune chero chiitiko:
Mune nhema ye € 16,95
Mune sirivheri ye € 17,99
Apple Tarisa Nike Sport Bhendi
Sezvo ini ndakatanga kuzviona munaGunyana wapfuura, ndiyo tambo yangu yandaifarira. Ndiyo tambo yeNike Sport yakanyatsogadzirirwa Apple Watch Nike +, zvisinei, Apple haizvitenge yoga saka kana iwe uchida imwe, unofanirwa kuwana iyi modhi yekutarisa. Asi nerombo rakanaka, kune vatove vagadziri vakakurumidza kuchipa nemutengo usingakundike.
Ndicho kwakavharwa nenyama silicone tambo uye kugadzikana kwazvo, nekuvhura kudiki izvo zvinoita kuti iwedzere kufema uye yakanaka kune mitambo. Kunyangwe ndaitopfeka kuti ndirare.
Inowanikwa kune ese ari maviri e38mm uye 42mm mawatch, uye mune dzakasiyana siyana musanganiswa wemavara, yakakwira kupfuura yepamutemo kupihwa. kwe € 16,99 chete.
Unogona kuitenga kuAmazon nekutumira mahara.
Bhandi kune anonyanya kufara
Kana iwe uri mumwe wevanhu ivavo vanogara vachifara muhupenyu, vanoda mwenje uye ruvara, uye vanodawo kuzvipatsanura kubva kune vamwe vese, tambo iyi yeMoko brand Apple Watch ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo.
Is Yakagadzirwa yakapfava silicone uye yakafanana zvikuru neMitambo tambo, kunze kwekupedzisa kwayo mumatanho matatu anotevedza muraraungu.
Is inowanikwa muna 38mm uye 42mm uye iwe unogona kuitenga kuAmazon kwe chete € 10,99, kutumira kunosanganisirwa.
Kisimusi Koreya yeako Apple Watch
Kana paine majuzi eshinda ane muti weKisimusi, Santa Claus kana boka rereer, nei tisingazove nemabhande eApple Watch akanyatsogadzirirwa zororo riri kuuya? Nemabhande aya, pasina kupokana, iwe uchaita mutsauko pakudya, kwemanheru nemapato eKisimusi.
Muzviitiko zvese izvi, iri tambo yemitambo yakashongedzwa neKisimusi motifs. Ose ari maviri yakagadzirwa nesilicone nemhando imwechete yekuvhara uye inowanikwa mu saizi mbiri, 38mm uye 42mm. Mutengo wacho ndewe € 9,99 uye € 10,99 zvichiteerana uye kana iwe uchimhanyisa, iwe unogona achiri kunakidzwa navo panguva ino yeKisimusi yave kuda kutanga.
Iyo modhi inonzi "Musha nemhembwe" unogona kuitenga pano.
El muenzaniso «Santa Claus» unogona kuitenga pano.
"Double Kuratidzira" tambo
Uye pakupedzisira, kana iwe waifarira iyo Hermès «Double Tour» tambo inodhura ruoko uye gumbo, heino iyi Sundaree modhi mune akasiyana magumo uye kune ese ari maviri ekuona saizi e € 14,99 chete kana € 24,99 kuAmazon.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Tambo dzakanakisa dzekupa maitiro matsva kuApple Watch yako
Anenge zvese zvinongedzo zvisipo ...
zvinongedzo zvashaikwa, zviise ndapota
Uye sezvandinovatarisa muamazon hapana zvinongedzo !!! plop !!
Pindura kuna Henry